IArdor 6.9 iza nenkxaso yeApple M1, izongezo kwizongezo nangaphezulu | Ubunlog
Inguqulelo entsha ye IArdor 6.9 ikhutshwe kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo kwaye olu luguqulelo oluza nolunye uphuculo, olona lubalulekileyo yinkxaso eyongeziweyo yezixhobo ezisebenzisa i-Apple M1 chip, ukongeza kwinto yokuba ezinye izinto ziphuculwe kwimanejala yokongeza, kwi ulawulo lwezintlu zokudlala kunye nokunye.
Inkqubo ibekwe njenge-analog yasimahla yeProTools, iNuendo, iPyramix kunye nezixhobo zobuchule zeSequoia.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeArdor 6.9
Iimpawu ezintsha eziphambili zeArdor 6.9
Kule nguqulo intsha yeArdor 6.9, abaphuhlisi bayayigxininisa loo nto amandla omphathi we-plugin aphuculwe, ukusukela ngoku umlawuli uye kwimenyu ye "Window" yenqanaba lokuqala kwaye ngoku khangela kwaye ubonise zonke iiplagi ezikhoyo kwinkqubo kunye neenkcukacha zayos, ukongeza kongezo inkxaso ukuze ukwazi ukuhlela nokucoca izongezo ngegama, uphawu, iithegi kunye nefomathi.
Olunye utshintsho olongezelelweyo yile ukhetho lokungahoyi iiplagi ezinengxaki kunye nokubanakho ukucacisa ngokucacileyo ifomathi ye-plugin xa kulayishwa (iifomathi ze-AU, i-VST2, i-VST3, kunye ne-LV2 ziyaxhaswa). Ukongeza, isicelo songezwa ukuba sikwazi ukuskena iiplagi ze-VST kunye ne-AU, ukuphazamiseka apho zingachaphazeli iArdor, kwaye incoko yababini entsha yaphunyezwa ukulawula ukuskena kweplagin, ikuvumela ukuba ulahle iplagi nganye ngaphandle kokuphazamisa inkqubo yokuskena ngokubanzi.
Kwelinye icala, kuyacaciswa ukuba Inkqubo yolawulo lokudlala iphuculwe ngokubalulekileyo, ukusukela iintshukumo ezintsha ezinoluhlu lokudlalwayo lwehlabathiezinje ngo "Uluhlu lokuDlalwayo eNtsha lweeTraki ezakhiweyo" ukurekhoda uhlobo olutsha lwazo zonke iingoma ezikhethiweyo kunye no "Khuphela uLuhlu lokuDlalwayo lwazo zonke iiNgoma" ukugcina imeko yangoku yokulungiswa kunye nokuhlelwa. Ukukwazi ukuvula incoko yababini ukukhetha uluhlu lokudlala ngokucinezela "?" ngengoma ekhethiweyo. Isakhono sokukhetha zonke iingoma kuluhlu lwadlalwayo ngaphandle kokwenza amaqela kwenziwe.
Singayifumana loo nto Ukusebenza ngokuhamba ngenqanaba lesampulu eguqukileyo kuphuculwe (varispeed) kwaye iqhosha longezwa ngokukhawuleza ukwenza / ukukhubaza i-varispeed kwaye uye kuseto.
"Ulawulo lweshatile" lula
Ukugcinwa kokumiselwa kwesantya esiguqukayo kubonelelwe, ngoku akuseti kwakhona emva kokutshintshela kumdlalo oqhelekileyo wokudlala.
Yongeze ujongano ukuvimba utshintsho lwepaki ye-MIDI ngexesha lokulayisha.
Inketho ivele kuseto ukwenza / ukukhubaza i-VST2 kunye nenkxaso yeVST3.
Inkxaso eyongeziweyo yeeplagi ze-LV2 ezinee-Atom port ezinje ngeSfizz kunye nomdlali weSFZ.
Yakha izixhobo ezisekwe kwi-chip ye-Apple M1.
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo, unokuthetha iinkcukacha kwikhonkco elilandelayo.
Kulabo banomdla wokukwazi ukufaka iArdor kwinkqubo yabo, kufuneka bazi ukuba iphakheji ingaphakathi Oovimba bolwabiwo oluninzi kwaye ukulungele ukufakwa, nje ngeenkcukacha ezithi le kuphela ingxelo yovavanyo.
Kwimeko yoBuntu kunye neziphumo, iphakheji iphakathi koovimba. Xa sele nditshilo, Ukuba ufuna ukuvavanya isicelo ndikushiyela imiyalelo yofakelo.
Enye indlela yokufaka iArdor kwinkqubo yakho ngoncedo lwe Iiphakheji zeplppak. Ngale nto, inkqubo yakho kufuneka ibenenkxaso yokufaka olu hlobo lweephakeji kunye nomyalelo wokufaka ngolu hlobo lulandelayo:
Kwaye u-voila, xa unokukhangela i-launcher kwimenyu yesicelo sakho okanye ukuba ufuna ukusebenzisa isicelo kwi-terminal okanye awukwazi ukufumana isiqalisi, vele uthayiphe:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » IArdor 6.9 ifika nenkxaso yeApple M1, ukuphuculwa kokongezwa kunye nokunye